Ogaden News Agency (ONA) – Kacdoon Kasocda Gobolka Axmaarada & TPLF oo Udigtay Shacabka Oromada.
Kacdoon Kasocda Gobolka Axmaarada & TPLF oo Udigtay Shacabka Oromada.
Wararka naga soo gaadhaya woqooyiga Gobolka Axmaarada ayaa sheegaya in ay kumanaan shacab ah oo taageersan wadaad Masiixi ah oo laxidhay isugu soobaxeen halkaas, waxaana lasheegayaa in ay ciidanka gumaysigu bilaabeen in ay xoog kukala eryaan shacabka cadhaysan.
Sida aan horaanba idiinku soo gudbinay ciidanka wayaanaha ayaa todobaadkan gurigiisa ka afduubay mid kamid ah wadaadada kaniisadaha oo siwayn looga taageero gudaha wadanka Itoobiya.
Abe Birhane ayaa afduub iyo jidh dil laysugu daray kadib markii uu siwayn uga horyimid dhul ay kaniisadiisu lahayd oo kooxda TPLF ay doonaysay in ay kasameeyaan xarun dadka lagu basaaso oo taleefoonada lagu dhagaysto, waxaana arintaas kadhashay kacdoon xoogan oo wadaadku uukubaaqay.
Warka ayaa intaas kudaraya in kacdoonka shalay uu bilowday kadib markii dhalinyaro aad utaageersan wadaadka ay ciidanka wayaanaha ka codsadeen in lasiidaayo maadaama oo sida ay sheegeen ay soo dhawdahay ciidii masiixiga. Waxaana lasheegayaa in ciidanka wayaanuhu ay kujawaabeen rasaas nool oo dadkii lagu riday, waxaana lasheegayaa in ay dadbadani kudhaawacmeen.
Dhinaca kale waraaq hanjabaad ah oo kasoo baxday taliska wayaanaha ayaa lagu sheegay in shacabka looga baahan yahay ilaalinta amaanka maalinta lagaadho xus waynaha ay dadka Oromadu sanadkasta isugu soobaxaan.
Xafladan ayaa sanadkii tagay lagu dilay boqolaal shacab ah oo Oromo ah kuwaas oo isugu soo baxay magaalada Bishuft, waxaana si lamid ah sanadkii hore aad looga baqayaa in dad kale oo shacab ah lalaayo.
Taliska wayaanaha ayaa sheegay in dadwaynuhu aysan soo xidhan karin dhar madow asayna aysan sooxidhan karin isla markaana aysan muujin karin wax calaamad ah oo muujinaysa xasuuqii Bishuft.
Hay’ada xuquuqul insaanka udooda ee HRW ayaa sheegtay in ay aad uga baqayaan in uu dhaco xasuuq lamid ah kii bishuft, waxayna hay’adu taliska wayaanaha uga digtay in uu galoxasuuq lamid ah kii sanadkii hore.